Thanksgiving Sunday Roast & Pool at the Rose Garden Hotel Yangon
Gather with your beloved family, friends and join our Thanksgiving Roast featuring freshly to order prepared BBQ & seafood live cooking, traditional Thanksgiving Turkey with stuffing, glazed whole ham, Pecan- and Key Lime pies.
Thanksgiving Day is began asaday of giving thanks for the blessing of the harvest and of the preceding year. Taking the moments that you have to share food with those you love is, as we see, the real reason to enjoy Thanksgiving. So enjoy the time spent together today and enjoy and maybe even have that extra portion of dessert.
A selection of traditional roast with all the fixings, fish option, themed Asian vegetarian corner and salad bar, assorted cold and hot tapas, assorted cakes and ice cream bar, unlimited draft beer and soft drinks, kids’ corner with face painting, live music and usage of the swimming pool for only USD 26.00 net per person on this Sunday 25th November 2018, start from 11:30 AM to 4:00 PM.
Off the shelves warehouse sales of fine wines and champagnes, to either enjoy during your lunch or take out, are available for sale.
For more information email info@theroseyangon.com or reserve HERE
ယောင်းရင်းတို့ ချစ်ရတဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတို့နှင့်အတူ ၂၀၁၈ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့ နံနက် ၁၁:၃၀ မှ ညနေ ၄:၀၀ ထိ Rose Garden Hotel မှာကျင်းပမည့် Thanksgiving Roast တွင် တစ်ယောက်$၂၆ဖြင့် ရေကူးကန်အသုံးပြုနိုင်ပြီး BBQ နှင့် ပင်လယ်စာ၊ ကြက်ဆင်သား၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ Pecane နှင့် Key Lime Pies၊ ရွေးချယ်စရာ အသားကင်များ၊ salad bar၊ သက်သက်လွတ်ကော်နာ၊ Tapas၊ ကိတ်နှင့် ရေခဲမုန့်ဘား တို့ပါဝင်ပြီး ဘီယာ, အအေးတို့ကို အကန့်သတ်မဲ့သောက်သုံးနိုင်သည့် အပြင် ကလေးငယ်များအတွက် မျက်နှာအလှ ဆေးချယ်ခြင်း Live musicတို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဝိုင်နှင့် Champagnes ကြိုက်နှစ်သက်သူတို့ အတွက်လည်း ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
အသက် ၄ နှစ် မှ ၁၁ နှစ် အရွယ်ကြား ကလေးငယ်များအတွက် ၅၀% ပရိုမိုးရှင်းလေးရှိတာကြောင့် ကလေးငယ်တို့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်နော်။
ဘွတ်ကင်တင်ရန်နှင့် အခြားသောအချက်အလက်များ အတွက် info@theroseyangon.comသို့ email ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အောက်ပါ လင့်ခ်တွင်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
PreviousPrevious post:Decadent Chocolate Night at the Rose Garden Hotel YangonNextNext post:Christmas Eve Dinner